Imizamo yakho yokuThengisa nge-imeyile ayinamsebenzi ukuba awusebenziswanga ngeSelfowuni | Martech Zone
Njengoko besijonge ukuphucula ukuzibandakanya kwethu, into yokuqala esiyenzileyo kukuphumeza iitemplate ze-imeyile eziphendulayo kusetyenziswa iqonga lethu, I-CircuPressukusasaza umxholo (Bhalisa yonke imihla okanye ngeveki). Utshintsho kumanani-manani lwalungeyonto imfutshane ngokumangalisayo. Sithumela i-imeyile yethu ngeveki ngaphandle kwababhalisi abangaphezu kwama-70,000 ngoMvulo nakwethu kubahlalutyi isibonisa ukuba sisipikisi esitratweni sethu ngaphaya kwayo nayiphi na enye indlela okanye ukunyusa.
Khange yenzeke de ii-imeyile zethu zenzelwe ukubonwa kweselfowuni, nangona! Ukucwangciswa kwekholamu enye ecocekileyo, kunye nokulula ukucofa amaqhosha amakhulu kunye namakhonkco awenze wonke umahluko ekutyhaleni abantu kwi-imeyile babuyela kumanqaku. Ngoku sisebenza ngokutsha ngokupheleleyo kwebhlog ukuze ibonelele ngamava amahle, aphendulayo nge-desktop, iselfowuni okanye ithebhulethi.
Ungathandi okanye ungathandi, ukusebenzisa izixhobo eziphathwayo kuye kwaba yinto yesibini kuthi. Ihlabathi lihamba kakuhle kwaye lihamba ngokwenene. Abathengi baziphatha ngokwahlukileyo kwii-smartphones kunye neetafile, ezinikezela ngokusebenza kunye nobuchule, kwaye kumashishini amaninzi oku kuthetha ukuba banokuqala ngokulula ukubona abanye babathengi babo bemka ukuba ukuthengisa kwabo ngeselula akukwazanga ukuqala. Ukuba nesicwangciso esisebenzayo esisebenzayo endaweni kubalulekile ukugcina abathengi bebuya. UCiaran Carlisle, uBoniso lweBlock
Iinkcukacha-manani akukho nto imfutshane ngokungaqiniseki kwiselfowuni… ukuba i-imeyile yakho okanye indawo yakho ayisiyiyo imeko elungileyo yomsebenzisi kwisixhobo esiphathwayo, uphosa itoni yotyalo-mali lwakho kwintengiso kude. Nazi izibalo ezi-3 zakho:
Ukuvulwa kwe-imeyile ephathekayo kukhule nge-180% kwiminyaka nje emithathu ukusuka kwi-15% ukuya kuma-42%!
Uhenyuzo I-68% yeGmail kunye neYahoo! ivula zenzeka kwi-smartphone okanye kwi-tablet.
I-75% yeimeyile zijongwa kwizixhobo eziphathwayo zinokucinywa ukuba azihambiselwanga nefowuni.
tags: izibalo zokuthengisa nge-imeyilei-imeyile evulekileyoIzibalo ze-imeyileUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiimeyile ephathekayomobile imeyile ephendulayoimeyile ephendulayoefowuniimeyile ye-smartphoneimeyile yeethebhulethi
Ukuba uqokelela idatha, umThengi wakho unalo olu lindelo
Sep 6, 2014 kwi-1: 00 AM
Inomdla omangalisayo wokubona uninzi lwabasebenzisi be-smartphone bevula ii-imeyile kwifowuni yakhe !!!